Mayelana Nokwenza Ukhokho
I-cocoa yethu iwu- 100% ukhokho omsulwa, ongenawo ushukela, izinongo, noma amafutha. Ukushisa okuncane nokucutshungulwa kuvumela ukuthi kugcinwe wonke ama-antioxidants anenzuzo kanye nezakhamzimba, okwenza kube enye indlela enempilo kuneziphuzo ezinoshukela. Ngenxa yokuthi izizathu azincibiliki oketshezini olushisayo, ukuvumelana kanye nokunambitheka kufana kakhulu netiye noma ikhofi kunoshokoledi oshisayo. Ukukhiqiza ukhokho kungenziwa kusetshenziswa umshini wokunyathelisa waseFrance, uhlelo lokuhlunga ikhofi eliconsayo noma isihluzi setiye. Kuhle kakhulu njengesiphuzo esishisayo noma esibandayo futhi kuyanconywa ukuthi usiphekwe isikhathi eside futhi usebenzise izizathu eziningi uma kufunwa ukunambitheka okuqinile. Njengekhofi noma itiye, ungaphuza ukhokho owenziwe ngethafa noma wengeze uju oluncane nokhilimu ukuze ukhiphe ukunambitheka okujulile kukashokoledi. Ungakwazi ngisho nokuxuba izindawo zakho zekhofi eziyintandokazi nokhokho ophisayo ukuze unikeze sonke isiphuzo semvelo esinokunambitheka kwe-mocha!
Ukhokho yi-Keto, i-Paleo, i-Non-GMO, i-Kosher, i-Sugar-free, i-Dairy-free, i-Gluten-free, kanye ne-99.9% ye-caffeine.
Ukhokho ugcwele imisoco efana nama-antioxidant ukuze uqinise amasosha akho omzimba kanye ne-magnesium ukuze usekele amathambo, ubuchopho, nempilo yenhliziyo. Ngenkathi iphansi kuma-carbs nama-calories, i-cocoa nayo isebenza njengento ecindezelayo yemvelo. Okuhle kunakho konke, i-cocoa ilayishwe izithuthukisi zemvelo ezingakusiza uzizwe umuhle, wandise ukugxila, wehlise ingcindezi, futhi ulale kangcono.
Izinzuzo ezimbalwa ze-cocoa zifaka:
Iqinisa amasosha akho omzimba, isekele amathambo, ubuchopho, nempilo yenhliziyo. Ilayishwe izithuthukisi zemvelo ukuze uzizwe ubingelela, ukhuphule ukugxila, unciphise ingcindezi, futhi ulale kangcono. Yehlisa isifiso sokudla futhi ikhuthaze ukuncipha kwesisindo. Yehlisa ukudla kwakho kwe-acidity.
Engeza ½ inkomishi kakhokho ku-32oz noma 34oz French Press. Thela amanzi abilayo ku-French press bese ugoqa. Vumela i-cocoa ukuthi ihambe imizuzu engu-10, igubungele ngezikhathi ezithile. Imizuzu engu-1-2 ngaphambi kokucindezela i-plunger, gxuma okokugcina. Cindezela i-plunger. Thela futhi ujabulele!
Uma uthanda, engeza ukhilimu, i-almond, isoya, noma ubisi lukakhukhunathi kanye nesishukela osithandayo.
Umshini owakha ikhofi
Engeza u-½ inkomishi kakhokho kusihlungi sethoni yegolide (akukho zihlungi zephepha) ebhodweni elingu-32 oz. (2 wezipuni ngo-8 oz). Engeza u-32 oz wamanzi. Brew. Sebenzisa "1-4 inkomishi" kanye/noma "inensa/egqamile" uma kungenzeka. Thela futhi ujabulele!
Beka isihlungi kumshini wokuphisa ngokugoqa okukodwa kude ne-spout. Engeza ½ inkomishi kakhokho. Faka kancane amanzi abilayo. Shiya imizuzu engu-5-10. Uma uthanda, engeza ukhilimu, i-almond, isoya, noma ubisi lukakhukhunathi kanye nesishukela osithandayo. Khonza futhi ujabulele!
Phisa ngokulandela imiyalelo bese ufaka efrijini ukuze uphole, noma phisa ngamandla aphindwe kabili bese uthela phezu kweqhwa. Uma uthanda, engeza ukhilimu, i-almond, isoya, noma ubisi lukakhukhunathi kanye nesishukela osithandayo. Khonza futhi ujabulele!
Inqubo yokupheka, ukugazinga, nokugaya ubhontshisi kakhokho ukuze udliwe kukholakala ukuthi yaqala kuma-Olmecs aseningizimu yeMexico ngo-1500 BC. AmaMayya atuswa ngenqubo yokubila, ukuwomisa, ukugazinga nokugaya ubhontshisi kakhokho. Njengoba ukhokho wawudlondlobala, abantu baqala ukuwuphatha njengesiphuzo esingcwele ngokuwuphuza njengengxenye yemikhosi, bewunikela njengelobolo emishadweni, futhi bewuncoma njengophawu lokuvelela.
Lapho ama-Aztec ethola ukhokho kumaMayans, awuphatha ngendlela efanayo—uma kungenjalo—ngenhlonipho. Eqinisweni, ubhontshisi kakhokho bagcina bengenye yezindlela zabo eziyinhloko zezimali, ezinikezwa onkulunkulu, ezisetshenziselwa imikhosi yomngcwabo, futhi zasakazwa kumasosha ase-Aztec ukuze kuthuthukiswe amandla.
Nginempilo kunekhofi lesintu
I-cocoa ayinayo i-caffeine ngamaphesenti angama-99.9. Esikhundleni se-caffeine, ukhokho uqukethe i-theobromine, okuyisiGreki esisho “ukudla konkulunkulu.” I-Theobromine iyisikhuthazi esingokwemvelo esinweba imithambo yegazi okwandisa ukugeleza kwegazi, ikunikeza amandla afanayo nalawo ekhofi eliwenzayo—ngaphandle kokuthi lihlala isikhathi eside.
Futhi, igcwele i-polyphenol Antioxidants nama-flavonoid (okukodwa kokugxila okuphezulu kunoma yikuphi ukudla emhlabeni), i-magnesium, nezithuthukisi zemizwa ezikhuthaza ukugxila, ukunciphisa ingcindezi, nokwenza ngcono ukulala. Ngaphezu kokuqinisa isimiso somzimba sokuzivikela ezifweni nokuba yikhambi lemvelo lokukhwehlela, ukhokho usiza ekwehliseni umfutho wegazi, uvimbele ukushaywa unhlangothi, uthuthukise impilo yenhliziyo yonke, usize ekugayeni ukudla, futhi wakhe amathambo aqinile.
Ingathuthukisa isimo sakho sengqondo futhi ikusize ulahlekelwe isisindo
Ukhokho uziqhenya ngengxenye yawo enhle ye-phenylethylamine, eyaziwa nangokuthi “isidakamizwa sothando.” Ngamanye amazwi, iqukethe ikhemikhali efanayo ekhishwa imizimba yethu lapho sithandana, ethuthukisa imizwa futhi ikhulise ukugxila nokuqaphela. Izithuthukisi zemizwa ze-cocoo ngokwemvelo azigcini lapho, noma kunjalo. Futhi iqukethe i-anandamide, i-serotonin, ne-tryptophan (ikhemikhali “yenjabulo” emizimbeni yethu, ikhemikhali “yokuzizwa ujabule” ebuchosheni bethu, kanye ne-amino acid edambisa ukucindezeleka yemvelo).
Inkomishi kakhokho ophekiwe ingasiza ngokwemvelo ukucindezela ukudla kwakho futhi kukhuthaze ukuncipha kwesisindo. Ngaphezu kwalokho, akudingeki ukhathazeke ngokuthi i-acidic futhi inokhahlo ohlelweni lwakho lokugaya njengoba ikhofi linjalo; izinga layo le-pH ngokuvamile liphakathi kuka-6.4 no-6.8 (i-7 ayithathi hlangothi).
Inambitheka njengoshokoledi oncibilikisiwe
Uma uke waba ne-chocolate bar emnyama enephesenti eliphezulu likakhokho (ake sithi, amaphesenti angu-55 kuya kwangu-80), cabanga nje ukuthi ibha incibilika futhi ixutshwe namanzi ashisayo (hhayi kakhulu kangangokuthi iyenza ibe namanzi amaningi, noma kunjalo. , okwanele ukwenza ukunambitheka kukashokoledi omnyama kushube kancane).
Uma ungeyena umlandeli kashokoledi omnyama futhi esikhundleni salokho uthambekele ekufinyeleleni ushokoledi wobisi endaweni ye-candy, ungaphinda wenze lokho kunambitheka ngokungeza ubisi noshukela kukhokho wakho ophekiwe. Okwenza ukhokho ophekiwe ube mkhulu kakhulu ukuthi ungakwazi ukwengeza noma yini kuwo futhi usazonambitha. Cabangela lokhu izaba obuzifuna kusukela ebuntwaneni ukuze uzitike ngesidlo sasekuseni—uma uthanda izinto ezimnandi, okungukuthi.
Iphisa njengekhofi lesintu
Empeleni, esikushoyo ukuthi ukhokho ophekiwe uyisixazululo sezinkinga zakho eziningi (mhlawumbe). Ngisho noma ukudla kwakho kuqukethe i-keto, paleo, Whole30, non-GMO, noma ukudla kwe-kosher, uma uphuza ubhontshisi kakhokho ongamaphesenti angu-100, kuhambisana ngokuphelele nalokho ngakunye. Inganikezwa ishisa noma iqhwa, futhi njengoba iphisa njengekhofi, ngeke udinge ukuphuma uyothenga noma yiziphi izinto ezisetshenziswayo ezikhethekile ukuze ujabulele inkomishi yalokhu. Ukhokho ophekiwe unempilo futhi uphephile ukuthi izingane ziwuphuze.
(Kusuka ku-Reader's Digest, Okthoba 26, 2021)
© 2023 nguCladdagh Coffee Roasters, LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe.